Ity no finday avo lenta avoakan'i Xiaomi amin'ny renders | Androidsis
Mpanolotra izay ho finday mivalona Xiaomi
Nanaitra anay i Xiaomi ny tolo-keviny ho finday mivalona de efa niseho herinandro vitsivitsy lasa izay. LetsGoDigital dia nanana hevitra mamirapiratra amin'ny fanaovana fandikana mitovy amin'ilay finday natolotr'i Xiaomi hanome antsika hevitra azo antoka kokoa momba izay hoentin'ny marika sinoa amintsika.
Ka io dia hita maso amin'izay azontsika hotazonina amin'ilay fampisehoana nataon'i Xiaomi izay ny finday aforitra ihany no hita ary tsy nisy naneho hevitra na oviana na oviana. zavatra momba ny mety ho specs. Fotoana fohy aorian'ny MWC, dia mandeha mankamin'ny ho fironana manaraka isika: mamoritra ireo finday.
Ny nataon'io ekipa io dia raiso ilay horonan-tsary ahitanao ny iray amin'ireo tovolahy Xiaomi miaraka amin'ny finday mivalona ary manaova famerenana mitovy mba hampisehoana amintsika sary samihafa misy fomba fijery sy zoro samihafa.
Izy io dia finday misy vala roa sosona. Izany hoe, azo itarina amin'ny fizarana roa izy mba hahafahantsika mamela azy araka izay itiavantsika azy araka ny filan'ny fotoana. Ny maody iray dia ny mahazatra amin'ny finday, raha mivalona dia mamela antsika hanana takelaka lehibe kokoa. Tsy izany ihany, fa azontsika ampiasaina ny elany 2 hametrahana azy amin'ny fomba tena hafa ary azo jerena tsara amin'ireo sary nozaraina.
Na izany na tsy izany, na dia mahazo hevitra an-tsary bebe kokoa aza isika momba ny mety ho fizotran'ny finday Xiaomi, tena tsy fantatsika ny batterie-ny, ny andinindininy ary ireo antsipirihany izay mety hidika fa isan'andro isan'andro dia tsara kokoa ny manohy miaraka amin'ireo finday avo lenta vaovao.
Manantena ihany koa izahay Finday vaovao mivalona an'ny Samsung izay azo inoana fa hatao amin'ny 20 Febroary. Noho izany dia manana herinandro sy volana maromaro mametaka ireo finday sisa tavela isika mba ho lasa olona fanirian'ny olona an'arivony maro manerantany. Amin'izao fotoana izao tavela amin'ny famerenana Xiaomi izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Mpanolotra izay ho finday mivalona Xiaomi